याकूब २ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२ हे मेरा भाइहरू हो, के तिमीहरू एकातिर हाम्रो महिमित प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दै अर्कोतिर भेदभाव पनि गरिरहेका छौ? २ किनकि सुनका औंठीहरू र राम्रो लुगा लगाएको एक जना मानिस अनि फोहोर लुगा लगाएको अर्को एक जना गरिब मानिस तिमीहरूको सभामा पस्दा, ३ तिमीहरू राम्रो लुगा लगाउनेलाई काखी च्याप्दै “तपाईं यहाँ राम्रो ठाउँमा बस्नुहोस्” भन्छौ, तर गरिबलाई चाहिं “तिमी यहीं उभिरह” अथवा “यहाँ मेरो पाउदाननजिकै बस” भन्छौ भने ४ के तिमीहरूले सानो-ठूलो भनेर भेदभाव गरिरहेका हुँदैनौं र? अनि के तिमीहरू दुष्ट्याइँका साथ फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू हुँदैनौ र? ५ हे मेरा प्रिय भाइहरू हो, सुन। के परमेश्वरले संसारका गरिब मानिसहरूलाई रोजेर विश्वासमा धनी अनि त्यस राज्यको उत्तराधिकारी बनाउनुभएको होइन र, जुन उहाँले आफूलाई प्रेम गर्नेजतिलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो? ६ तर तिमीहरूले गरिब मानिसको अनादर गरेका छौ। के धनी मानिसहरूले तिमीहरूको शोषण गर्दैनन्‌ अनि के तिनीहरूले तिमीहरूलाई घिस्याएर अदालत लैजाँदैनन्‌? ७ तिमीहरूलाई दिइएको असल नामको के तिनीहरू निन्दा गर्दैनन्‌ र? ८ तर यदि तिमीहरू धर्मशास्त्रमा लेखिएबमोजिम “तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नू” भन्ने शाही व्यवस्था पालन गर्छौ भने असलै गरिरहेका छौ। ९ तर यदि तिमीहरू भेदभाव गरिरहन्छौ भने तिमीहरूले पाप गरिरहेका हुन्छौ, किनकि त्यो व्यवस्था आफैले तिमीहरूलाई दोषी ठहराउँछ। १० यदि कसैले मोशाको व्यवस्थामा भएका सबै कुराहरू पालन गर्छ, तर एउटा आज्ञा पालन गर्नमा चाहिं ऊ चुक्छ भने उसले पूरै व्यवस्था उल्लङ्घन गरिरहेको हुन्छ। ११ किनकि जसले “तिमीले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अरूसित यौनसम्बन्ध नराख्नू” भन्नुभयो, उहाँले “तिमीले हत्या नगर्नू” पनि भन्नुभयो। त्यसैले यदि तिमी आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अरूसित यौनसम्बन्ध राख्दैनौ तर हत्याचाहिं गर्छौ भने तिमीले व्यवस्था उल्लङ्घन गरिरहेका हुन्छौ। १२ तिमीहरू ती मानिसहरूझैं बोलिरहो अनि ती मानिसहरूले झैं व्यवहार गरिरहो, जसको न्याय स्वतन्त्र मानिसहरूको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ। १३ किनकि जसले कृपा देखाउँदैन, न्याय हुँदा ऊमाथि पनि कृपा देखाइनेछैन। कृपाले न्यायमाथि विजय हासिल गर्छ। १४ हे मेरा भाइहरू हो, यदि कसैले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छु भन्छ तर त्यसबमोजिम कामचाहिं गर्दैन भने के फाइदा हुन्छ र? के त्यस्तो विश्वासले उसको उद्धार गर्न सक्छ? १५ यदि कुनै भाइ वा बहिनीसित लुगा छैन वा दिनभरि खान पुग्ने भोजन छैन १६ र तिमीहरूमध्ये कोही उसलाई “शान्तिसित जाऊ, न्यानो गरी बस अनि पेटभरि खाऊ” भन्छौ तर उसको शरीरलाई चाहिने कुराचाहिं दिंदैनौ भने त्यसबाट के फाइदा हुन्छ र? १७ विश्वास पनि त्यस्तै हो, यदि कामबाट प्रकट हुँदैन भने त्यो मरेको हुन्छ। १८ तथापि, कसैले तिमीलाई यसो भन्न सक्छ: “तिमीसित विश्वास छ तर मसित कामहरू छन्‌।” तिमी कामविनाको विश्वास देखाऊ तर म आफ्ना कामहरूद्वारा मेरो विश्वास प्रकट गर्नेछु। १९ परमेश्वर एकै जना हुनुहुन्छ भनेर तिमी विश्वास गर्छौ, होइन र? धेरै राम्रो। दुष्ट स्वर्गदूतहरू पनि विश्वास गर्छन्‌ अनि थरथर काँप्छन्‌। २० तर ए अज्ञानी, कामविनाको विश्वास निष्क्रिय हुन्छ भनेर चाहिं के तिमी स्वीकार्न चाहँदैनौ? २१ आफ्नो छोरा इसहाकलाई वेदीमा चढाएको हुनाले नै के हाम्रा पुर्खा अब्राहाम कामद्वारा परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिएका होइनन्‌ र? २२ तिनले विश्वास गर्नुका साथै त्यसबमोजिम काम पनि गरे र तिनको कामले गर्दा नै तिनको विश्वास पूर्ण भयो २३ अनि धर्मशास्त्रमा लेखिएको यो वचन पूरा भयो: “अब्राहामले यहोवामा विश्वास गरे र यसले गर्दा तिनी उहाँको नजरमा असल ठहरिए” अनि तिनी “यहोवाको मित्र” कहलाइए। २४ त्यसैले तिमीहरूले देखिहाल्यौ, मानिसलाई उसको विश्वासद्वारा मात्र होइन तर कामहरूद्वारा परमेश्वरको नजरमा असल ठहराइनेछ। २५ त्यसैगरि, के वेश्या राहाबले सन्देशवाहकहरूलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरेर अर्कै बाटोबाट पठाइदिएकी हुनाले नै तिनी कामद्वारा परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिएकी होइनन्‌ र? २६ निस्सन्देह, जसरी सासविनाको* शरीर मरेको हुन्छ, त्यसरी नै कामविनाको विश्वास पनि मरेको हुन्छ।
^ या २:२६ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।